Amaholide e Side - inhlanganisela Okuhamba phambili kwe-Beach Korforta nezinhlelo uhambo
Amaholide e Side lidumile izivakashi unyaka wonke. Lokhu edolobheni iseduze Antalya, ke ingenye ezinhle kunazo yedolobha izivakashi okuphakade solar oluhlaza naseTurkey. I namathafa wendawo kuyoletha injabulo yobuhle futhi abahlanganyela ne abathandi bemvelo izinto zokuzilibazisa nenithanda ubuhle ukucatshangelwa. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona itholakala kwi lenhlonhlo zemvelo amahle kakhulu lubhekisele oLwandle iMedithera.
Side yasungulwa B7 BC leminyaka. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kwaba ichweba elikhulu esifundeni komlando ePhamfiliya. Esikhathini 2nd AD kwekhulu, zodumo kwakhiwa lapha simo, kangangokuba namuhla ukuheha izivakashi. Lokhu Amphitheatre, Agora, yamathuna, imisele yamanzi nezindawo eziyisikhumbuzo kanye alawo machibi aseRoma. Ngakho-ke kuphumula elalingenakho Side ngokuvamile khetha abathandi komlando wasendulo.
Ogwini zitholakala engxenyeni esempumalanga nengxenye esentshonalanga yedolobha. Okuningi yagcwalisa amabhishi zasentshonalanga, kuyoba njalo uma uthanda ukuthula, ukukhetha amahhotela empumalanga.
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Side limelela izifunda eziningana kufakwe kuwo Kumkey, Titreyengel, Monavgat, futhi Cholakly Sorgun.
Umuzi ine a evuthiwe ingqalasizinda izivakashi. Kukhona zokudlela eziningi izinombolo onguchwepheshe kuphela imenyu izinhlanzi. Kusihlwa futhi ebusuku ungahlala ukuthola indawo iholidi ezithakazelisayo, isibonelo, endaweni yokucima ukoma ngomculo bukhoma noma disco.
Ntambama ungasebenzisa umphefumulo enyuka izitolo kancane futhi izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo, ukuyothenga okungukuthi ayikhathalisi, futhi kakhulu, mnandi kakhulu.
Kuhle ukuvakashela nezingane, ngoba kahle wacabanga iholidi kakhulu.
Izaphulelo wathenga Side abahambi unyaka wonke. Bona angathengwa kusengaphambili, noma ubhalisele iminikelo zakamuva Side. Uma kuqhathaniswa nezinye izindawo zokungcebeleka eziningi Turkish of Side akuyona njengoba ezibizayo futhi cishe neze kunabayeni emadolobheni imfashini kakhudlwana futhi ethandwa. Ngaphezu kwalokho, uma iqhathaniswa nezinye idolobha Turkish izivakashi mecca, lokhu ukukhetha, ngoba akudingeki uchithe isikhathi esengeziwe nemali ohambweni esathatha isikhathi eside ukuze izindawo ukubaluleka zomlando namasiko. Ngemva Side - ezivulekile Museum.
Ngakho-ke, ngomzuzu evamile noma wokugcina Side ithandwe phakathi wonke amaqembu zezivakashi. Sithathe izinkambo kungaba anobude obungalingani nemibandela elahlukile ophilayo.
Ukukhangana main lomuzi - Isango main. Basuke etholakala ephakathi kwalezi zakhiwo ezimbili, ebanikeza ukubukeka ngokubabazekayo kakhulu. umthombo olunothile kakhulu Nimpazum, esemgwaqweni eduze. Agora - uhlobo isikhungo zokuhwebelana kanye izikebhe izicelo. Lapha namuhla ungahamba ezitolo, vakashela ezimakethe zakuleli ezimibalabala.
Ungase futhi ukuya lwaleli kwesakhiwo okubi okwakugcwele eMbusweni WaseRoma, esemgwaqweni emgwaqeni esemqoka yedolobha, vakashela City Theatre, ezigodlweni nasezikhungweni Museum abavubukuli, okuyinto namuhla zingabangane alawo machibi aseRoma.
Ungaya ku-Antalya eseduze, engesiyo kuze kube manje, esingaphansi km 70. Ukuze wenze lokhu, kungcono uthenge bhasi. Amaholide e Side kungaba okhuthele.
Amahhotela zitholakala kulo lonke endaweni yokungcebeleka. Izikhungo kunoma imiphi kuyo ekilasini lokuqala ngempela, okuyinto ejwayelekile wonke amahhotela Turkish. Abasebenzi iyakwamukela izivakashi nge friendly futhi zisize.
Amahhotela basonta siqu amabhishi yabo uzilungise futhi izitsha cuisine Turkish ngempumelelo ephelele iholide lendawo namasiko Culinary kwamasiko. Ukukhetha iholide e Side, uthola induduzo inkonzo enkulu.
Ezitaladini Old Town, ungahamba uye olwandle, ukuhamba itheku olunothile. izitolo eziningi zinikeza ngokuchichima emangalisayo kwezimpahla kusukela zokuhloba napkins ngezandla. Enkabeni yedolobha ungathola emahhotela amancane umndeni, kanye Villas emangalisayo, sizungezwe izingadi oluhlaza kanye izimbali.
Okuqinile double anesitezi isitimela kusuka eMoscow kuya Kazan: izithombe, incazelo, ukubuyekezwa
Wabasaqalayo Yikuphi processor kungcono kanjani ukususa igciwane Vkontakte
Bollywood Sea Queen 3 * (India, Goa): izibuyekezo, izithombe
"Abramtsevo", Museum-estate: kanjani lapho, indawo, ukubuyekezwa
The best rock band Russia: uhlu lwamagama